मृत्यु अवश्यंभावी छः डा. उपेन्द्र देवकोटा | suryakhabar.com
Home पु.समाचार समाचार मृत्यु अवश्यंभावी छः डा. उपेन्द्र देवकोटा
मृत्यु अवश्यंभावी छः डा. उपेन्द्र देवकोटा
on: २७ जेष्ठ २०७५, आईतवार १५:२२ In: समाचार, स्वास्थ्यTags: No Comments
काठमाडौं । मेरो बेलायती न्यूरोसर्जन मित्र हेनरी मार्स ‘बेस्ट सेलर’ किताब लेखक पनि हुन्। उनलाई लिएर म बिहानै आफ्नै मोटरमा गाउँतर्फ लागेँ, १२ बजेतिर घर पुग्यौँ। म हिँड्नुअघि नै मामाको छोरा भाइलाई गाउँ पठाएको थिएँ आवश्यक व्यवस्था गर्न। घरबाट प्याक गरेको स्यान्डविच थियो हामीसँग। माया गरेर बियर पनि राखिदिएको रहेछन् फ्रिजमा। गोरखा लिगलिगबाट द्रव्य शाहको दरबारतिरको उकालो लाग्यौँ। हेनरी मभन्दा ३र४ वर्ष जेठा हुन्। उक्लँदा मलाई अलिअलि गाह्रो भो। म सहरिया भएछु क्यारजस्तो लाग्यो।
वास्तवमा मर्नु आफैँमा ठूलो कुरा हो। मर्ने व्यक्तिले उसलाई सम्झने के कुरा बाँकी छाडेर जान्छ यो लोकमा त्यसले महत्व राख्छ । विभिन्न अनलाइन तथा उपेन्द्र देवकोटासँग सम्बन्धित शैक्षिक सामग्रीको सहयोगमा तयार पारिएको छ ।
२७ जेष्ठ २०७५, आईतवार १५:२२